बाँदरको कैरन, हेरालोलाई हैरान- विविधा - कान्तिपुर समाचार
सोनी बराल गौली
ओ दाइ ? हैन, म दिदी
फाल्गुन २५, २०७५ राजेन्द्र मानन्धर
काठमाडौँ — २२ हजार ट्याक्सी चालकमा एक दर्जन महिलाको कसरी चल्दै छ गुजारा ? अल्छी नगरी मिहिनेत गरेमा ट्याक्सीबाट राम्रो हुने नवीना सुनाउँछिन् । 'पढाइमा कमजोर, ट्याक्सी चलाउन अब्बल छु हो किन डराएको’ स्वयम्भूस्थित ट्याक्सी स्टेन्डमा भेटिएकी ३२ वर्षीया कर्माथिङ तामाङले स्टेरिङ घुमाउँदै भनिन् ।
ट्याक्सी चालक बायाँबाट क्रमशः चालक कर्माथिङ तामाङ, ईश्वरी थापा र नवीना खड्का । तस्बिर : राजेन्द्र/कान्तिपुर
‘आज बिहान माछापोखरीमा एकजना ओर्लिएपछि अर्कोले सोध्यो– ओ दाइ एयरपोर्ट जाने हो ? मैले भनें, म दाइ हैन दिदी ।’ सदाझैं शुक्रबार बिहान बालुवाटार घरबाट ट्याक्सी चलाउँदै निस्कँदा नवीना खड्कालाई यात्रुले केटा जस्तो देखेँ । कालो चस्मा, मास्क र पहेंलो बाहुलाबिनाको ज्याकेट लगाएर ट्याक्सी चलाउँदा नवीनालाई धेरैले दाइ नै भन्छन् । ‘हैन दिदीभन्दा कार हो कि क्या हो भनेर झस्कन्छन्,’ डेढ वर्षदेखि ट्याक्सी चालकको पेसामा जम्दै आएकी ४० वर्षीया नवीनाले भनिन् ।
ट्याक्सी चालक संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिन र रात्रिकालीन ट्याक्सी सेवाका करिब २२ हजार पुरुष ट्याक्सी चालकको हूलमा एक दर्जन महिला प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन आ–आफ्नै गतिमा ट्याक्सी चलाइरहेका भेटिँदा सबैले पेसाप्रति खुसी र सन्तोषजनक कमाइ भइरहेको सुनाए ।
ट्याक्सी चालक भरत केसीको सूचनाका आधारमा बालुवाटारस्थित नवीनाको निजी घरमा पुग्दा उनी यात्रु ओसार्न सडकमा थिइन् । १५ वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका नवीनाका श्रीमान् रत्न दाहालले नवीनाले ट्याक्सी चलाउन निकै मिहिनेत गर्ने गरेको बताइन् । साँझपख खुल्ने मदिरा पसल पनि धान्छिन् । घरको काम पनि भ्याउँछिन् । दुईवटा ट्याक्सी र पसलको कमाइले उनीहरूको बालुवाटार र जोरपाटीमा घर छ । नवीना भन्छिन्, ‘मासिक ६० देखि ७० हजार रुपैयाँ ट्याक्सी चलाएरै कमाउँछु ।’ अल्छी नगरी मिहिनेत गरेमा ट्याक्सीबाट राम्रो हुने उनी सुनाउँछिन् ।
हालसम्म नवीनाले ४४ हजार किलोमिटर ट्याक्सी गुडाउँदा सामान्य दुर्घटना पनि भएको छैन । महिलाले होसियारीपूर्वक वाहन चलाउँछन् भन्दै केही यात्रुहरू फोन गरेर उनको ट्याक्सीलाई कुर्छन् । नवीनालाई उपत्यकाबाहिर जान दुविधा लाग्दैन । नवलपरासीसम्म रात बस्ने गरी यात्रु लिएर गइन् । जन्मघर दोलखा चरिकोट चार पटक पुगिन् । मनकामना, नेपालथोक, खाडीचौरसम्म गइरहन्छिन् । परिवारले साथ दिएकाले र आफूमा आँट भएकाले बाहिर जाने यात्रु पाउँदा खुसीपूर्वक यात्रा गराउने दिने उनी बताउँछिन् ।
उनले सुरुमा स्कुटी सिक्दासिक्दै खुट्टा भाँचिन् । त्यसपछि मोटरसाइकल सिकिन् । हल्का सवारी साधनको चालक लाइसेन्स लिँदा पहिलो पटक असफल भइन्, दोस्रो पटक उत्तीर्ण भइन् । मोड्न, फर्काउन र अति नै जामका बेला केही अप्ठ्यारो परे तापनि मन नै देखि मन पराइएको पेसा भएकाले नवीनालाई खासै ट्याक्सी चलाउन गाह्रो हुन्न । शौचालय नपाएर अस्पतालमै पुग्नुपर्दा र पार्किङ गर्ने ठाउँको अभावले भने हैरानी पार्ने उनी बताउँछिन् ।
भूकम्पपीडित सहुलियतको ट्याक्सीको चिट्ठा बुबालाई परेपछि नवीनाको ट्याक्सी चलाउने रहर पूरा भएको हो । बुबा शेरबहादुर खड्का भन्छन्, ‘छोरीलाई खुसी भएर ट्याक्सी दिएँ, अहिलेको प्रगति देख्दा झनै खुसी छु ।’
नवीना दैनिक चार घण्टा जति सुत्छिन् । दिउँसो नभ्याउने भएकाले लुगा राति २ बजेसम्म पनि धोइरहन्छिन्, राति नुहाएपछि नभिजेको कपाल सिरानी भिज्ने डरले खाटबाट तल झारेर सुत्छिन् । तल थापिएको बाटामा पानी खसेको बिहान उठ्दा देख्छिन् । फुर्सद हुनेबित्तिकै स्कुटरमा दैनिक १५ जनाजति ग्राहकको घरमा जारको पानी पुर्‍याउँछिन् ।
काम नभएको दिनचाहिँ जीउ दुख्ने र काम गरिरहँदा खुसी र आनन्द मान्ने बानीको परिणाम आज राजधानीभित्र दुई ठूला घर जोड्न सफल भएको उनले सुनाइन् । दोलखा काब्रोबाट खाली हात आएको तर आजका दिनमा आर्थिक अभाव नभएको उनका परिवारका लागि नवीना उदाहरणीय बनेकी छन् । उनी सबै जस श्रीमान्प्रति समर्पित गर्न चाहन्छिन् ।
आईएसम्म अध्ययन गरेकी उनी नर्स बन्न चाहन्थिन् । गाडी र होटलमा कमाइ छ भन्ने बुझेकीले श्रीमान्लाई ट्याक्सी किन्न उनले सघाइन् । आफूले पनि ट्याक्सी किनिन् । ट्याक्सी चलाउने पेसालाई अपजस दिए पनि उनका यात्रु भने खुसीपूर्वक यात्रा गर्छन् । जहिल्यै मिटर खोल्छिन् । खुसीपूर्वक बढी पैसा दिए लिन्छिन् । उनलाई यो पेसा असुरक्षित लाग्दैन । अत्यधिक मदिरा सेवन गरेका र लुटेरा जस्तालाई उनी सेवा दिन्नन् । एक पटक मदिरा सेवन गरेर ल्याङल्याङ गरेका यात्रुलाई अरू ट्याक्सीका पुरुष चालकको सहायतामा ओरालिदिएको उनले बताइन् ।
पुरानो चालकको अनुभूति
‘एयरपोर्टबाट नयाँ बसपार्क यात्रु लिएर जाँदै छु, त्यहीँ आउनुस्,’ ईश्वरी थापालाई नारी दिवसको औपचारिक भाषणतर्फ ध्यान भएन । बसपार्कभित्र केहीबेर कुर्दा पनि केही रकम गुम्नेतर्फ उनी सचेत थिइन् । त्यसैले छिट्टै भेट गर्ने मनसाय सुनाइरहँदा दिनभर उनलाई मिडियाले पछ्याइरहेको सुनाइन् ।
किनकि उनी ट्याक्सी चालक संघको उपाध्यक्ष हुन् । उनका अनुसार हालसम्म सात जना व्यावसायिक महिला ट्याक्सी चालक छन् । कहिले चलाउने र कहिले छाड्नेसहित गरेर १५ जना जति उक्त पेसामा रहेको उनले बताइन् ।
नौ वर्ष पहिले ट्याक्सी हाँक्न सुरु गर्दा उनी एक्ली महिला ट्याक्सी चालक थिइन् । जन्म स्याङ्जा, काभ्रेपलाञ्चोक निवासी ३४ वर्षीया उनले सुरुमा भाडा र अहिले आफ्नै ट्याक्सी चलाउँछिन् । बिहान ५ देखि साँझ ६ बजेसम्म ट्याक्सी कुदाउने उनी सुरुका दिनजस्तो खट्न सक्दिनन् । उनले राम्रो पैसा पनि कमाइन् । अहिले भने एक्ली छोरी र आफूलाई गुजारा चलाउन कठिन नपर्ने उनी सुनाउँछिन् । खाडी जानुभन्दा उत्तम यो पेसा महिलाको संख्या बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएकामा उनी दुःखी छन् । ट्राफिकको ज्यादती र मिटरको पैसा नबढाइएकाले उक्त पेसाबाट अल्छी लाग्न थालेको उनले बताइन् ।
उनी दसैं र तिहारका बेला स्वयम्भू र नयाँबस्तीमा दुई पटक लुटिइन् । त्यसपछि राति ट्याक्सी चलाउन छाडेको उनी बताउँछिन् । एउटै पेसामा खटिरहँदा भीडमा जान मन नलाग्ने, गर्मीमा इन्जिनको तातोले जीउ र खुट्टा पोल्नेबाहेक ट्याक्सी चलाउन उनका लागि अरू कुनै दुःख छैन ।
राज्यको हौसला आवश्यक
‘पढाइमा कमजोर, ट्याक्सी चलाउन अब्बल छु हो किन डराएको’ स्वयम्भूस्थित ट्याक्सी स्टेन्डमा भेटिएकी ३२ वर्षीया कर्माथिङ तामाङले स्टेरिङ घुमाउँदै भनिन् । उनी सांस्कृतिक पोसाकमा थिइन् । आफ्नै ट्याक्सीमा आएकी उनी भने आफन्तको बिहेमा निम्ता मान्न आएकाले शुक्रबार यात्रुलाई सेवा नदिने बताइन् । सिरहा घर, ललितपुर माइती बताउने उनी महिलालाई खाडीमा गएर दुःख पाउनु भन्दा ट्याक्सी चालक पेसा अँगाल्न सुझाउँछिन् ।
ट्याक्सीबाट ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ कमाउने उनले यसअघि एक वर्ष माइक्रोबस चलाइन् । साढे दुई वर्ष इजरायल राजदूतको परिवारको गाडी चलाइन् । सबैभन्दा आनन्दको पेसा ट्याक्सी चलाउन लाग्ने उनका लागि खाडीको कमाइ नेपालमा खलासी गरेर कमाइन्छ जस्तो लाग्छ । छ कक्षा उत्तीर्ण उनलाई टिप्न जाने नेपालमै जताततै पैसा छ जस्तो लाग्छ । ‘कात्रोमा खल्ती नभएकाले मरेर केही लान सकिंदैन’ भन्ने उनी नेपाली दिदीबहिनीलाई खाडीमा जान किन मन लागेको होला भन्ने प्रश्न गर्छिन् ।
यो पेसाप्रति एकदमै सन्तुष्ट उनी ट्राफिक प्रहरीको बोली र नराम्रो शब्दले मन दुखेको बताउँछिन् । कालो नम्बर देख्नेबित्तिकै हेप्ने नीति बदलिनुपर्ने र १०, १२ जना महिला ट्याक्सी चालकलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले ९८ प्रतिशत यात्रु इमानी र दुई प्रतिशत बेइमानी भेटेकी छन् । उनले एकजना यात्रुले राति ट्याक्सीमा अश्लील बोले र ओर्लने बेला बत्ती बाल्दा झस्किएको प्रसंग सुनाइन् । ‘ओहो बहिनी पो हुनुहुँदो रहेछ सरी सरी म त केटा ड्राइभर पो भन्ठानेको भन्दै आर्लिए,’ उनले केही रमाइला प्रसंग सुनाउने क्रममा भनिन् ।
ट्याक्सी चालक संघका महासचिव पूर्णबहादुर तामाङले महिला ट्याक्सी चालक बढाउन संघले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उपत्यकाभित्र सुरक्षा र सजिलोका लागि महिलाको संख्या बढाउन तालिम दिने नीति लिने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ ०७:२२